အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ
AOX-မေး စီးရီး အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor နှင့် torque ပွောငျးလဲ ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ တစ်ဦး လွှဲ တစ်ဦးngle rတစ်ဦးngတွင်g အကြား 90°တစ်ဦးnd 270Â°, ထိုကဲ့သို့သော တစ်ဦးs လိပ်ပြာ vတစ်ဦးlves, bတစ်ဦးll vတစ်ဦးlves.Bတစ်ဦးsed အပေါ် technicတစ်ဦးl သဘောတရား တစ်ဦးnd ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံ, AOX compတစ်ဦးny's ထူးခြားသော technicတစ်ဦးl ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ် အဆိုပါ bတစ်ဦးsic မောင်းနှင်မှု ဘို့ce ဘို့ တစ်ဦးll ကုန်ပစ္စည်း တိုးတက်ရေး တစ်ဦးnd သိပ္ပံနည်းကျသော ကုန်ပစ္စည်းiအပေါ် ဘို့ AOX-မေး စီးရီး အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor နှင့် torque ပွောငျးလဲ. AOX compတစ်ဦးny ဖြစ် ကြီးထွားလာ သို့ တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g compတစ်ဦးny တွင် vတစ်ဦးlve တစ်ဦးutomတစ်ဦးtiအပေါ် တွင်dustry နှင့် တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced နည်းပညာ။
ရရှိနိုင်ဗို့အား၏ 1. Wide အကွာအဝေး
AOX-မေးစီးရီးအစိတ်အပိုင်းအတွက် 2. Window torque switch သည်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn: Polycarbonate င်းဒိုး built-in O-ကွင်း, fixed သတ္တုဂလင်း, အဂလင်းကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လွယ်ကူရေ, ကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်ခုရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကြွလာ။
AOX-မေးစီးရီးအစိတ်အပိုင်းအတွက် 3. ဖြုတ် drive ကိုဘုရ်ှ torque switch သည်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn
1. ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာစေရန် torque switch သည်နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားနှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator လှည့်ကို၎င်း, ကွန်နက်ရှင်မူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်သည့် AOX-မေးစီးရီးစုတစုလုံးကိုအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးရှိသင့်ပါသည်။
အဆိုပါ AOX-မေးစီးရီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသုံးပြီးခင်မှာ 2. torque switch သည်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်, ဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုဖတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းအရသိရသည်အတည်ပြုရန်။ လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မီ, ထို site မှာ power supply ဗို့အားအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဝါယာကြိုးပုံမှအတိုင်းဝါယာကြိုးစစ်ဆေးပါ။ ဝါယာကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Terminal ကို၏ဝါယာကြိုးမြဲမြံစွာဖြစ်သင့်အခါဝါယာကြိုးအရေအတွက်အာရုံစိုက်။
3. လျှပ်စစ် actuators မကြာခဏထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့်အတူနေရာ, အမြဲ connectors ကောင်းသောအဆက်အသွယ်နှင့်သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိမရှိရှိမရှိ, အစွဲစေချောင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
AOX ပါဝါဘူတာရုံ, သံနှင့်သံမဏိ, ရေနံ, ဓာတု, ရေနံပိုက်လိုင်းမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော solution.AOX-မေးစီးရီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဆို့ရှင်နှင့်အတူ mounting torque switch သည်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် , မိလ္လာကုသမှုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်။
မေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany အမည်ဖြင့်သင်၏အ AOX-မေးစီးရီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ရှိသည်နိုင်သလား torque switch သည်သို့မဟုတ်အထုပ်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator turn?
Q: တကယ်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ actuator ရဲ့အရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမိန့် AOX-မေးစီးရီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း torque switch သည်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ရှေ့တော်၌ငါနမူနာ get နိုင်သလား?
hot Tags:: အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque switch သည်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
module အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator